नि: शुल्क वेब स्क्रैपर्स र डाटा खनन कार्यक्रमहरूको बारेमा सेमिल्ट टिक्सहरू
वेब सामाग्री र डेटा को एक तरिका मा पहुँचा जा सकता छ, र सबैभन्दा साधारण तरिका API हरू प्रयोग गर्दैछ वा सही कोड उपलब्ध गराएर वेब पृष्ठ पार्स गर्दैछ। वेब स्क्रैपिंग व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ ती व्यक्तिहरूले या त आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका छन् वा एक सुरुवात गर्ने हो। यस अभ्यासको कारण, तपाईं सकेसम्म धेरै साइटहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको आवश्यकता अनुसार डेटा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले सर्वोत्तम वेब स्क्रेटर र डेटा खनन कार्यक्रमहरूमा छलफल गरेका छौं।
दुर्भाग्यवश, सोशल मिडिया र खुला वेब डेटा मुख्य रूपमा असंगत रूपहरूमा उपस्थित छन्। Computyne संग, तपाईं सजिलै एक विशाल संख्यामा साइटहरू र सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइल प्रोफाइलहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई कुनै पनि समस्या बिना तपाईँको उपकरणमा तस्बिरहरू बचत गर्न मद्दत गर्न सक्छ। Computyne द्रुत, सही र विश्वसनीय वेब वा डेटा स्क्रैपिंग सेवा प्रदान गर्दछ। यसले तपाईंलाई विकिपीडिया, ट्रिप एडवायर, पीला पृष्ठहरू, सेतो पृष्ठहरू, Google नक्सा, Yelp, र ट्विटरबाट डाटा स्क्रैप गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
2. क्रोप्स क्रोमर:
धेरै वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरूको विपरीत जुन डाटा वा उपयोगी जानकारी फसल हुन्छ, कोडको कुनै पनि आवश्यकता बिना तपाईंको डाटा स्क्रैप गर्नुहोस्। तपाईसँग यसको क्लाउड स्टोरेज उपकरणसँग जडान गर्न र तपाईलाई आवश्यक पर्ने डेटा स्क्रैप गर्न सुरु गर्नुहोस्। Grepsr ले Google Drive मा डेटा बचत गर्दछ, तर ड्रॉपबक्स, अमेजन र एफटीपी सेवाहरू पनि उपलब्ध छन्। तपाईंको सेट समय मा नयाँ र अवस्थित डेटा को लागी देखने को लागि ताकि तपाईं इन्टरनेट मा उपयोगी जानकारी को खोज मा समय बिताना छैन।
3. टैरिटोूलो - acne cream derma.ओई:
टारटोकु शक्तिशाली वेब स्क्रैपिंग प्रोग्राम जुन यसको प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेसको लागि चिनिन्छ। यो धेरै वर्षको लागि वरिपरि रहेको छ र धेरै साइटहरु र ब्लगहरु लाई स्क्रैप गरेको छ। यसले तपाइँको साइट क्रल गर्न र संरचित र गैर-संरचित डेटा निकाल्न मद्दत गर्दछ। अनलाइन स्रोत।
आईडेटागुरुले स्क्रिनमा सही, जोखिम-रहित र सस्ती डेटा प्रदान गर्दछ। उपाध्यक्ष, वेबसाइट क्रल गर्ने सेवाहरू, स्क्रिन स्क्रैपिंग र पाठ पार्सिङ सेवाहरू। एक अग्रणी सफ्टवेयर हुनु भएको छ, iDataGuru ले तपाईको डेटा तुरुन्तै स्क्रैप गर्दछ र स्वास्थ्य सेवाका विशेषज्ञहरू, आईटी विशेषज्ञहरू, बैंकरहरू, वित्त अधिकारीहरू र वेब विकासकर्ताहरूद्वारा मनपर्छ।
BotScraper एक शक्तिशाली र अद्भुत वेब स्क्रेपर र डाटा खनन उपकरण हो जुन इन्टरनेटमा गहिराइरहेको छ र तपाईले डेटाको सबै बिट पत्ता्छ। यसले त्यस अर्थपूर्ण जानकारीलाई उपयोगी डेटामा रूपान्तरण गर्छ, तपाईंको अनलाइन व्यापारको किनारा प्रदान गर्दछ। यो एक 100% जोखिम मुक्त प्रविधी हो जसले तपाइँलाई अनुकूलित सेवाहरू प्रदान गर्न, तपाईंको अपेक्षाहरूसँग आउँदछ र तपाईंको व्यवसायको आवश्यकता पूरा गर्न अन्य वेब स्क्रैपिंग सेवाहरूसँग जोड्दछ। BotScraper एक महत्वाकांक्षा डाटा स्क्रैपिंग कार्यक्रम हो जसले यसले राम्रो तरिकाले संरचित डेटा को साथ इन्टरनेट को क्रान्तिकारी गरेको छ। यो सफ्टवेयर पनि तपाईंको ईमेलहरू निकाल्न सक्छ र कुनै पनि समस्या बिना कोडित साइटहरू र एन्कोड गरिएको ईमेलहरू स्क्रैप गर्न सक्छ।